पापुआ न्यू गुयना त्यस्तो देश हैन कि धेरै मानिसहरु लाई थाँहा छ। एउटा टापुमा अवस्थित रहेको छ जुन इण्डोनेशियासँग संयुक्त रूपमा साझा गर्दछ, यो आधिकारिक रूपमा ओशियन देश हो। करीव .7.3. million मिलियन जनसंख्या होल्डिंग, कसैले सोच्दछ कि यो अनलाइन जुवा समात्नको लागि एकदम राम्रो स्थान हो। त्यहाँ 800०० भन्दा बढी भाषाहरू बोलिने हुँदा यसले पापुवा न्यू गुयनीहरूलाई अनलाइन प्लेटफर्मको वरिपरि सफलतापूर्वक नेभिगेट गर्न सक्षम पारिरहेकोमा प्रभाव पार्न सक्दछ, यद्यपि अंग्रेजी मुख्य भाषाहरू मध्ये एक हो।
शीर्ष १० पापुआ न्यू गिनी अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
शीर्ष १० पापुआ न्यू गुयना अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
पापुआ न्यू गुयना अनलाइन क्यासिनो उद्योग बिस्तारै तर स्थिर हुँदै गइरहेको छ, ग्लोबल आईग्यामि growth् विकासको ठोस प्रवृत्ति पछि। अनलाइन क्यासिनो पापुआ न्यू गुयना वास्तविक पैसामा खेल्न खोज्ने व्यक्तिको मात्रा निरन्तर बढ्दैछ। जहाँसम्म स्थानीय रूपमा दर्ता पापुवा न्यू गुयना क्यासिनो साइटहरूको संख्या शून्यको निकट छ, त्यहाँ अझै पनि तपाईंको क्यासिनो आग्रहलाई शान्त पार्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसोभए यदि तपाईंले भर्खर तपाईंको लागि उत्तम अनलाइन क्यासिनो पापुवा न्यू गुयना खोज्ने यात्रा सुरु गर्नुभयो भने, स्लॉट्सपमा, हामी तपाईंलाई प्रीमियम विकल्पहरूको साथ आउन मद्दत गर्नेछौं।
पापुआ न्यू गुयना सब भन्दा व्यापक इन्टरनेट कभरेजको गर्व गर्न सक्दैन। न त यो विश्वको धनी देशहरू मध्ये एक हो। यद्यपि सरकारले अनलाइन जुवा पापुवा न्यू गुयनाको अत्यधिक नाफामूलक उद्योगमा लगानीको महत्त्व महसुस गरेको देखिन्छ। यस लेखमा, तपाईले अनलाइन क्यासिनो पापुवा न्यू गुयना बजारको कानूनी नियमनका साथसाथै मुख्य जुवा कानूनहरू, दिशानिर्देशनहरू, र देशमा अवस्थित अधिकारीहरूको बारेमा पढ्नुहुनेछ। अरू सबै भन्दा माथि, यस पृष्ठमा, तपाईं पापुआ न्यू गुयना खेलाडीहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो अनलाइन क्यासिनोको खोजीलाई अन्तिम रूप दिने संभावना पाउनुहुनेछ।
पापुआ न्यू गिनीमा जुवा
२०० 2007 को वर्षमा, प्रधानमन्त्री र सरकारले आधिकारिक रूपमा सबै भूमि आधारित र अनलाइन क्यासिनोहरू चिठ्ठा, खेल सट्टेबाजी र घोडा रेसि including सहित कानूनी मान्यता दिए। कानूनको साथ, राष्ट्रिय गेमि Control कन्ट्रोल बोर्डलाई देशभरका सबै जुवा कार्यहरू नियमन, अनुगमन र व्यवस्थित गर्न भेला भएको थियो। भर्खरै स्वीकृत गेमि Control कन्ट्रोल बिलले पापुवा न्यू गिनीको प्रत्येक प्रान्तमा १ क्यासिनो राख्न अनुमति दिन्छ जबकि इजाजतपत्र एक दशकको अवधिको लागि हो। सबै क्यासिनो धारकहरूलाई २०% बराबर कुल राजस्व कर लागू गरिनेछ, थप%% सहित जुन सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायहरूलाई समर्पित छ।
हाल पापुआ न्यू गुयनामा कुनै भूमि-आधारित क्यासिनोहरू छैनन् तर अनलाईनहरू फस्टाउँदैछन् र तिनीहरू निरन्तर प्रचार गर्दैछन्।
२००१ मा एसियाली अपराध परिवारहरूले आयोजना गरेको थुप्रै अवैध सुविधाहरू थिए। तिनीहरू विभिन्न छायादार जुवा गतिविधिहरूमा सम्बन्धित थिए, बाट रूले र कार्ड खेलहरू घोडा दौड र स्लटहरूमा, सबै महाद्वीप र दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रमा। यसले अवैध क्यासिनो रिसोर्टहरू र होटेलहरूको समन्वय र लेखा पनि समावेश गर्दछ।
२०० 2004 मा सरकारले उनीहरूको व्यवसाय बन्द गर्न र कानूनको साथ कुनै समस्याहरु हटाउन सबै अवैध खेल सुविधा को लागी h 36 घण्टा फ्रेम दियो। केन्द्रीय अधिकारीहरूको उदारताको बाबजुद कोही-कोहीले अवैध नगद प्रवाहलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरे।
त्यसको धेरै समय नबित्दै २०० 2005 मा स्थानीय पुलिसले Port०० भन्दा बढी मेशिन र क्यासिनो उपकरण जफत गर्दै पोर्ट मोरेस्बीको एउटा सबैभन्दा ठूलो अवैध क्यासिनोमा छापा मारे। यसले बाँकी भूमिगतताको लागि उदाहरणको रूपमा काम गर्‍यो र यसलाई अझै यो प्रकारको सबैभन्दा ठूलो पुलिस क्यासिनो आक्रमणको रूपमा चिनिन्छ।
२०० In मा नेशनल गेमि Control कन्ट्रोल बोर्ड भेला भएको थियो र सबै क्यासिनो अपरेशनहरू कानून बनाइएका थिए।
२०० 2008 मा सामाजिक समूहहरू र चर्चहरूले २०० Pap को क्यासिनो ऐनको विरोध गर्न असफल भए जुन अपील गरी पापुवा न्यु गिनीमा जूवाले स्थानीयबासीलाई मात्र गरीबी ल्याउँछ। गभर्नर-जनरल सर पॉलियास मटानेले जनताको कारणलाई समर्थन गरे तर अहिलेको मितिसम्म यो लडाई जारी छ।
सुरक्षा र इजाजत पत्र निकाय
तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ कि मुख्य पापुआ न्यू गिनी गेमि reg नियामक राष्ट्रिय गेमिंग कन्ट्रोल बोर्ड हो जुन तपाईंलाई देशमा क्यासिनो सञ्चालनहरू गर्ने कानूनी अधिकार दिन्छ। तर त्यहाँ अरू पनि छन् जुन अपरेटरको प्रामाणिकता र सुरक्षाको समग्र भावनाको बारेमा अतिरिक्त विश्वास प्रदान गर्दछ। माल्टा गेमिंग प्राधिकरण (एमजीए) को सब भन्दा जुवा उद्योग मा प्रभाव छ विश्व भरि र यो एक सबैभन्दा विश्वसनीय खेल अधिकारीहरूका रूपमा गणना गरिएको छ। ईकोग्रा जस्ता संस्थाले पनि तेस्रो पार्टी नियामकका रूपमा पापुवा न्यू गिनिया सहित सबै अपरेटरहरूको गुणवत्ता र निष्पक्षता जाँच गर्दैछ। GamCare र BeGambleAware जस्ता परोपकार समूहहरू कडा कडा उन्मुख छन् जुन विकसित समस्या जुवा र यसले ल्याउन सक्ने दुर्भाग्यहरूका साथ मद्दत गर्न।
शीर्ष १० पापुआ न्यू गुयना अनलाइन क्यासिनो साइटहरू अपडेट गरिएको: जुन 9, 2020 लेखक: Damon
1 शीर्ष १० पापुआ न्यू गिनी अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
1.1 शीर्ष १० पापुआ न्यू गुयना अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
2 पापुआ न्यू गिनीमा जुवा
3 सुरक्षा र इजाजत पत्र निकाय
शीर्ष १० पापुआ नयाँ ...